Kiss m, argha nkezi 4.6 / 5 si 77
24th, o nwere 280.7K echiche
Dịka odeakwụkwọ, è nwere ihe jọkarịrị njọ karịa ịchụpịa onye isi gị? Ihe ọzọ bụ na ọga a bụ nnukwu nkuzi Alfa. Afọ ole ka ọ ka na-enwe mmekọahụ na ịjụ nwoke Omega! Naanị mgbe Yeon Woo chere na ịhụnanya nzuzo nzuzo ya ga-agwụ n'efu, ọ chọpụtara na onye isi ya nke leliri ya anya na-elekọta ihe niile maka ya. Mgbe usoro okpomọkụ gasịrị, ọ bụghị naanị na-egosi nguzogide, kamakwa mee ka ahụ ya na-ekpo ọkụ…
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ mangaonline
Kindaichi Shounen No Jikenbo - Usoro ikpe